आउँदै गरेको सन २०२० मा यी ५ राशिहरुको भाग्य चम्किने ! अवस्य पढ्नुहोस – " सुलभ खबर "
आउँदै गरेको सन २०२० मा यी ५ राशिहरुको भाग्य चम्किने ! अवस्य पढ्नुहोस
एजेन्सी ।नयाँ वर्ष सुरु हुनै लाग्दा मानिसहरु नयाँ-नयाँ ठाउँमा घुम्न जाने र नयाँ मान्छेसंग भेट्ने गरिरहेका छन्। यस उत्साहमा कोही मान्छेले सबै पुराना दुखहरु भुलेर अगाडी बढ्छन् भने कोही पुरानै सम्बन्धलाई एक मौका दिरहेका हुन्छन्। यिनै अवसरहरुका बीच यस लेखमा जान्नुहोस् जुन राशि अनुसार यो वर्ष तपाईका लागि सम्बन्धहरुलाई लिएर कस्तो रहनेछ।
मेष राशी: मेष राशिका मानिसहरुका लागी २०१८ मा माया प्रेमको दृष्टिले धेरै राम्रो हुनेछ। यी मान्छे सप्तमेशको उच्चाभिलाषी भएका कारण दामपत्य जीवनमा प्रगति र विवाह आदि कार्यहरुमा प्रगति हुनेछ। नयाँ वर्षमा मेष राशि भएको मान्छेको नयाँ प्रेम सम्बन्ध बन्न सक्छ। तर राशिमा मंगल पनि साथ-साथ रहेको छ। जसको सम्बन्धमा अचानक अवरोध पनि आउन सक्छ। यसैले मंगल र राहुको शान्ति गर्नु फलदायक हुनेछ।
वृष राशि: यो वर्ष वृष राशि भएको व्यक्तिको लागी सामान्य रहने छ। शनि सातौ स्थानमा हुनाले र मंगलमा राहु भएकोले यो वर्षको शुरुवातमा वैवाहिक जीवनमा समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ। तर तपाईको रोमांटिक व्यवहारले यस समस्यालाइ कम गर्न मदत गर्छ। मार्च महिनापछि तनावमा कमी आउनेछ र सबन्धमा तिब्रताका साथ सुधार हुनेछ। नयाँ सम्बन्ध पनि बन्न सक्ने योग रहेको छ।
मिथुन राशि: यो वर्ष मिथुन राशि भएको मान्छेको लागि धेरै राम्रो समय रहने छ। नयाँ मान्छेसंग चिनजान हुने योग देखिन्छ। विवाह गर्न चाहानेहरुका लागि यो वर्ष धेरै राम्रो रहने छ। पुराना सम्बन्धमा सुधार आउने सम्भावना छ।
कर्कट राशि: कर्कट राशि भएका मान्छेहरुका लागी यो वर्ष पुराना सम्बन्धलाई एक नयाँ मौका दिने बर्ष रहेको छ। साथै कतिपयको नयाँ सम्बन्ध पनि बन्ने छन्। यस वर्षको सुरुमा सप्तमेश पंचम भावमा हुनाले नयाँ प्रेम सम्बन्ध स्थापित हुनेछ।
वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशिहरुका लागी यो वर्ष तनावपूर्ण रहने छ। शनि धनु राशिमा जानुका साथै तनावमा कमी हुनेछ।तर पुन: वृश्चिक राशिमा फर्किनुका साथै अवरोध सुरु हुनेछ। शनि र राहुको पुजा गर्नु लाभकारी हुनेछ।